Golaha Ammaanka oo sheegay in Al-shabaab ay u dagaalamaan 6,200
Xoghayaha Guud ee QM Antonio Guterres ayaa Warbxin Digniin ah ku sheegay in Caruurtu ay Qeeyb weeyn ka Yihiin Askareeynta Qasab ka ah ee Alshabaab.
Warbxinta oo Golaha amaanka loo Gudbiyay Isbuucii dhamaaday ayaa waxaa uu Xoghaya guud ku sheegay in Al-shabaab ay Caruurta u isticmaalaan Difaac, oo ay ku Jiraan kuwo Da’doodu ay tahay Sagaal Sanno lana Baray isticmaalka Qoryaha yar yar loona diro Furimaha Hore ee Dagaalka,
Xoghayaha Guud QM ayaa sidoo kale Sheegay in Caruurta loo Isticmaalo Daabulaadda Qaraxyadda, Shaqadda Basaasnimadda iyo Qaadista Rasaasta.
Waxaa lagu Qiyaasay in ka badan kala Bar Dagaalamayaaasha Al-shabab in ay Yihiin Caruur, Silamid ah na Dagaalyahanaddii Alshabaab ee lagu qabtay Bishii March 2016 Maamul Goboleedka punt land waxaa ay ahaayeen Caruur.
Qaar kamid ah Caruurta Waxaa lagu Soo dumay Balanqaadyo la Xiriira Shqooyin iyo Wax barasho.
Warbxinta Qaramadda Midoobe ayaa waxaa lagu sheegay in kastoo Alshabaab ay yihiin Kuwa ugu Daran ee Caruurta Askareeya Hadana Ciidamadda Doowladda iyo kooxaha Kale Waay isticmaalaaan Askareeynta Caruurta.
Sidoo kale Soomalaya waxaa lagu Qasbay in ay Askar Noqdaan Caruur ay Tiradoodu Gaareeyso, 6163. Kuwaas oo 5993 ay Wilal Yihiin 230 kamid ahna ay Gabdho yihiin, intii u dhaxeeysay Bishii april 2010 illaa iyo Bishii July Sanaddii 2016.
Alshabaab ayaa Waxaa u dagaalama 70% ama 4213, Ciidamadda Doowladda ayaa Waxaa Sidoo kale u dagalamada Caruur at Tiradoodu Gaareetso, 920.
Xoghayaha Guud ee Golaha Amaanka QM ayaa Dhinacyadda Isku Haya Soomaliya ugu Baaqay in ay Joojiyaan Askareeynta Caruurta iyo ku Xadgudubka Sharciyadda Caalamiga ah ee Banii aadanimadda.